Ciidamadda PSF oo sheegay in afar maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadoow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamadda PSF oo sheegay in afar maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadoow
April 2, 2018 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Sawirka askari katirsan Ciidanka PSF oo ka dagaalamaya Buuraha Galgala.
Garoowe-(Puntland Mirror) Afar maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa Ciidamadda Ammaanka Puntland ee PSF ay ku dileen howlgal Axadii dhacay, sida PSF ay ku sheegeen bayaan ay soo dhigeen Facebook-kooda.
PSF ayaa bayaanka ku sheegay in howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanada Booj iyo Dhagaxbuur oo katirsan Buuraha Caalmadoow.
PSF ayaa intaas ku dartay in deegaanada Galgala iyo Sugure ay ka saareen maleeshiyada Al-Shabaab.
Ciidanka PSF ayaa la dagaalamaya Al-Shabaab tan iyo markii ay kacdoonkeeda hubeysan ay ka bilowday Buuraha Galgala sanadkii 2010. Ciidamada ayaa sidoo kale dagaal kula jira ISIS, oo ah koox yar oo hubeysan taasoo ballanqaaday inay daacad u tahay ISIS sannadkii 2015-ka.
December 23, 2018 Al-Shabaab iyo ISIS oo tartan ugu jira canshuurista khasabka ah ee ganacsatada Puntland